कोरोनासँग जम्काभेट - टाकुरा न्युज
२०७७ सालको अश्विन १६ गते शनिबार विराटनगरतिर गएँ । साँझमा विराटनगर कै केही साथीहरु इटहरी मेरै अफिसमा भेट भयो, कुराकानी भयो । बेलुका मलाई ज्वरो आयो, टाउको दुखो र को को सँग कति नजिक बसियो भनेर विचार गरें । भौतिक सामिप्यता थिएन भेटघाटमा अलिक ढुक्क भएँ ।
सुरु सुरुमा कोरोना यति ठूलो भएर आयो कि दन्त्य कथाको भयंकर राक्षस जस्तो भएर आयो । एउटा गाउँपालिका अन्तर्गत कसैलाई कोरोना भयो भने पूरै इलाका अछुत जस्तो ठानियो । कोरोना लागेको मान्छेलाई घृणा गरियो र अपराधी जस्तो ठानियो । संचारमाध्यम र सरकारको प्रचार वाजीले झन आतंकित बनायो समाजलाई । यो आतङकलाई कम गर्नु पर्छ भन्ने ठहर थियो मेरो ।
त्यसैले सजग रहने र दूरी कायम गरे कोरोना लाग्दैन, लागिहाले पनि मृत्यु नै भै हाल्ने हैन भनेर हिड्ने गरें । राहत संकलन गर्न र पत्रकारहरुलाई रातह वितरण गर्न अनि वीमा गराउन पनि हिँडडुल गर्नुप¥यो । मलाई सबैले भन्थे धेरै नहिड्नु लखर लखर कोरोना लाग्ला ।
नभन्दै त्यो दिन ज्वरो आयो । ज्वरो भन्दा पनि टाउको को दुखाई फरक खालको र कडा थियो । त्यसैले २।४ दिन बस्न मामाको घर गएकी बीना (पत्नी) लाई बिहानै फोन गरेर भने तिमी आउनै पर्ने भो मलाई पकाएर खुवाउनु पर्ला । बीना हतारिरै आइन, मैले भने अलग्गै बसेर सेवा गर, बाथरुम अलग्गै प्रयोग गर । मैले खाएका वर्तन म आफैँ मोल्छु । साथीभाइ, छरछिमेकी र आफन्तलाई पनि घरमा आउन बन्द गरिदियौ हामीले, केवल घरमा हामी साठी नाघेको बुढा र बुढी ।
वीना निक्कै डराइन् । मैले भनें मलाई केही हुँदैन । तिमीलाई पनि यसले छोड्दैन । दश बाह्र दिनमा निको हुन्छु र तिम्रो सेवा गर्छु, अहिले तिमीले मेरो सेवा गर । असोज २० गतेका दिन साँझमा अपर्झट मेरा सम्धि यदुनन्दन आचार्यको स्वर्गवास भयो । मनले मानेन । मोटर साइकिल लिएर बेलुका ८।९ बजे तिर गएँ । भोलीपल्ट घाट सम्म पनि गएँ तर मान्छेहरु भन्दा अलगथलग बसें । किनभने मलाई लागिरहेको थियो कोरोनाले भेटिसकेको छ मलाई । त्यसपछि टाउको दुख्ने क्रम अझ बढ्यो । खाना पटक्कै रुचेन, गन्ध पूरै हरायो र अक्सिजनमा कमी हुन थाल्यो ।
ज्वरो आएको छैटौ दिनमा अर्थात अश्विन २२ गते पीसीआर गर्न गएँ । एभिन्यूजका पूर्वाञ्चल व्यूरो सचिन पोख्रेलले पीसीआरका लागि विराटनगरमा सहज प्रवन्ध गरिदिएका थिए । भोलीपल्टै रिपोर्ट आयो । कोरोना पोजेटिभ । मलाई अनौठो लागेन किन भने मलाई विश्वास थियो पोजेटिभ आउँछ भन्ने, प्रमाणित गर्नुमात्र थियो, प्रमाणित भयो । अक्सिजन सिलिण्डर झिकाएँ । अक्सिजनको प्रबन्ध गर्ने काम छिमेकी भाइ चण्डिका नेपालको भयो । अस्पताल जान पटक्कै मन थिएन, तर अक्सिजनमा कमी हुँदै गयो । अक्सिजन सिलिण्डरले ३।४ घण्टा मात्र थाम्ने । मेरो जेठो ज्वाँइ उमेश आचार्य आफ्नो पिताजीको कृयामा बस्नु भएको थियो ।
उहाँको राय पनि अनिवार्य अस्पताल जानु भन्ने थियो । र, विराट टिचिङ अस्पतालमा बेड प्रबन्ध गर्ने काम पनि उहाँ र उहाँका दाजु सुरेश आचार्यले गर्नुभयो । म २५ गतेको साँझ एम्बुलेन्स लिएर विराट टिचिङ पुगें तर बेड रहेनछ । कोशी कोभिड अस्पतालमा पो मिल्यो भन्ने खबर आयो त्यहाँ पुगें । साथीहरु लवकुमार घिमिरे, बलराम गिरी, भान्जा हरि दाहाल अस्पतालनमा पुगिसकेका थिए । म चाँडै निको भएर आउँछु भन्दै हात हल्लाएर पुरानो धानचामल कम्पनीको भवनमा रहेको अस्पताल पसें र ३४ नं. कोठामा बसें । अक्सिजनको राम्रो प्रबन्ध भएको आइसियु रुम भनिएको थियो । त्यो कोठालाई । त्यसमा चार बेड थिए र म सँगै चारै जना कोरोना पीडित थियौ त्यहाँ ।
कोठामा एयर कण्डिशन थियो तर विग्रिएको । एउटा सिलिङ पङखा थियो, एउटा वेडलाई मात्र हावा पुग्थ्यो । मेरो वेड माथि विजुलीको वल्व बल्थ्यो । वत्तीमा आएका किराले वेड भरिन्थ्यो, गर्मी मनग्गे थियो । हाम्रो कोठा अगाडि गल्लीको भित्तामा डाक्टर र नर्सका नंबर भनेर टाशीएका थिए तर ती कुनै नंबरमा फोन लाग्दैन थियो । त्यो गल्लीबाटै आइसियु र भेन्टीलेटर भएको कोठा तिर पुगिन्थ्यो । २६ गतेका दिन एकजना विरामी त्यही गल्लीको भित्तो समाउदै पाइला चाल्दै थिए ।
नियालेर हेरें, मेरा साडदाजु बद्रि पोख्रेल । आइसियुबाट उहाँ वाथरुम हिड्नु भएको रहेछ । स्टिलका तीन वटा सीडि चढेर जानु पर्ने दुईवटा टवाईलेट र एउटा वाथरुम नाम दिइएको कोठा, तर पानी जमेर पस्न नहुने, बन्द गरेर राखिएको । स्टीलका सिडीको तल दुर्गन्धित जमेको पानी त्यो पानी हैन पिसाबको पोखरी थियो । त्यहाँ पुगेर मलमूत्र त्याग गरेर कोठामा पुग्नु भनेको आधा मृत्यु थियो अक्सिजनको कमी भएका बिरामीलाई र पनि भित्तो समातेर त्यतै जादै थिए आइसियुबाट मेरा साडुदाजु ।
त्यसको अव्यवस्थाले अर्को अस्पताल सर्नुपरो भन्ने लाग्यो । न्यूरो अस्पतालका वेड बन्दोबस्त गरेछन् साथीहरुले । भाञ्जा हरि मलाई डिस्चार्ज गराउन अस्पताल आए । त्यो थाहा पाएर एकजना डाक्टर (सम्भवत नाम उत्सव हुनुपर्छ) आए र भने “अंकल अस्पताल किन फेर्नु हुन्छ जहाँ गए पनि उस्तै हो, म आइसियुको सुविधा दिन्छु तपाईलाई ।” उनको आग्रह टार्न सकिन मैले र न्यूरोको वेड छोडिदिनु भनें । न्यूरोको वेड पनि छोडियो तर यहाँ डाक्टरको आस्वासन कार्यान्वयन भएन । एसि चलाई देउ भने, मिस्त्री छैन भने । वेड माथिको विजुलीको बल्ब अर्को होल्डरमा सारिदेउ भने, त्यति अग्लोमा भेट्ने मान्छे छैन भनियो ।
अनि मैले नवीन गिरीलाई फोन गरेर भने “भाइ एउटा स्टेण्ड पङखा चाहियो ।” नभन्दै भाइले पङखा पठाई दिए तर विजुलीको प्लक छैन भएको पनि खराब छ पङखा घुम्दैन । कोरोना नेगेटिभ आएर घर जान लागेका एक युवा आएर बल्ब अर्को होल्डरमा सारिदिए । अर्को एक जना संक्रमित भाइ आए र प्लक बनाइ दिए । खाना पटक्कै रुच्न छोड्यो अस्पताल कै तर्फबाट खाना दिन्थे । समग्रमा खाना नराम्रो थिएन । बिहान ब्रेकफाष्ट, दिउँसो लञ्च, अपरान्ह फेरि खाजा र बेलुका खाना दिन्थे, तर के गर्नु खानालाई हे¥यो अनि डसवीनमा फ्यालो । सारै माया लाग्थ्यो खानाको । मेरो वेडको सामुन्नेको वेडमा एउटी चौधरी महिना थिइन । तिनी कोरोना मुक्त भैसकेकी थिइन । जतिखेर जे ल्याइदिए पनि उनी खपाखप सबै खान्थिन र दिसा पिसाब त्यही कोपरामा गर्थिन ।
शारीरिक कारणले हिड्न कठीन रहेछ उनलाई । ती महिला डिस्चार्ज भएर गैसकेपछि त्यो वेडमा एकजना महिला आइन । नर्सहरुलाई मैले भने कमसेकम “सिट कभर त अर्को हाली देउ त्यो वेडढमा” तर सुनेको नसुनै भए र त्यही सीटमा जस्ताको त्यस्तै सुताए ती विरामीलाई र गएँ । मैले ठाने मलाई पनि त त्यस्तैमा सुताएका होलान नि !
अर्को वेडमा एकजना तराइवासी वृद्ध महिला थिइन । तिनी फोनमा रुन्थिन । मेरो पङखाको केही हावा उनको सम्म घुम्ने बनाई दिए । उनले एकपल्ट भनिन मसँग धेरै जग्गा जमिन छ तर छोरा छोरी छैनन् । देउरानीको छोरो छ । मैले मनमनै सोचें देउरानीको छोरोले अस्पतालमै मरोस भनेर पठाएको होला भन्ने ठानेर यी मान्छे रोएकी होलिन । केहि दिन पछि उनको पि.सि.आर. रिपोर्ट बेलुकै आएको थियो तर उनले बुझ्ने गरी कसैले बताई दिएन ।
बिहान बलैले मैले भनिदिएँ “आज तिमीलाई घर पठाउँछ, तिमी ठीक भयौ ।” वेडबाट फुत्तै ओर्लिएर म छेउ आएर सोधिन, साच्चै हो ? हो भने मैले । उनको अनुहारमा एक्कासी सूर्य उदाए । म तिरै फिरेर तीनपल्ट हात जोडिन र गएर झोला मिलाउन थालिन । यी समेत तीन जना महिला त्यो कोठाबाट विदा भैसकेका थिए । लहरी भुजेल, रमेश अधिकारी र झापाको कुनै अस्पतालमा काम गर्ने महिला आए खाली वेडमा । सबै वेडमा १२।१४ दिन कोरोना पीडित सुतेको तन्नामा सुताए नयाँ बिरामीलाई । झापाबाट आएकी महिलाले भने झोलाबाट झिकेर आफ्नो तन्ना ओछ्याइन ।
न्यूरो अस्पतालमा पाएको वेड छोडि हालियो । त्यस पछि, न्यूरो, नोबेल, मोरङ सहकारी, बिराट टिचिङ कतै पनि वेड पाइएन । लव घिमिरे, पत्रकार महासंघ मोरङ का सभापति वन्धु पोख्रेल, भाञ्जा हरि, नवीन गिरी र सुभाष कार्की समेतले प्रयत्न गरे तर खालि भए पो पाउनु, त्यसैले जे हुन्छ, यही बस्छु भने मैले ।
अस्पतालले दिने खाना सन्तोष जनक थियो । अक्सिजन व्यवस्थित थियो । त्यहाँ आउने डाक्टर नर्स, खाना दिने र सरसफाई कर्मचारी सबै पि पी लगाएका छन्, अनुहार शरीर सबै ढाकिएको छ कोही चिनिदैनन् । कुनै कुनै डाक्टरले चै पि पी मा म्यअतयच लेखेका हुन्थे र डाक्टर रहेछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो । अचाक्ली गर्मी छ । पूरै प्लाष्टिकको खोलले शरीर ढाकिएको छ । ड्यूटी समय भरी दिसापिसाब गर्न पाउँदैनन्, डाइपर लगाएका छन् । प्लाष्टिकको खोल भित्र शरीर भरी पानी जमेको छ । आँखामा वाफ बसेको छ, राम्रोसँग हेर्न पनि सक्तैनन् । नर्सहरु आउछन् । प्रेसर नाप्छन्, अक्सिजन लेवल हेर्छन । सामान्य सोधपुछ गर्छन । बुबा भन्छन्, अङकल भन्छन् राम्रो बोल्छन् तर हतार हतार गरेर जान्छन् । उनीहरु कुन कष्टसाथ काम गर्दैछन् भनेर कल्पना गर्दा पनि आफूलाई कष्ट हुने ।
आफुलाई जति कष्ट भए पनि मैले नर्सहरुलाई कुनै गुनासो गरिन, छोराछोरी नै भनें तिनीहरुलाई तर दिनमा बलैले एक पल्ट झुल्किने डाक्टर र फोन गरेर सल्लाह दिने अझ, माथिका डाक्टर सँग भने मैले नम्र बोल्नु पर्छ भन्ने ठानिन र अस्पतालको अव्यवस्था प्रति अप्रसन्नता नै व्यक्त गरें । जति कराए पनि विरामी भनेको थालापरेको चितुवा हुन जस्तो गर्थे, एक कानबाट सुन्थे र अर्को कानबाट उडाउँथे ।
पि पी लगाएका सबै उस्तै लाग्छन् । उनिहरुको अवस्था हेर्दा माया लाग्छ । अलिक कडासँग भन्न मन लाग्छ । अस्पताल र डाक्टरहरुको लापरवाहीका बारेमा भन्न मन लाग्छ तर भन्न सक्तिन । त्यो प्लाष्टिकको खोलमा गुम्सिएका डाक्टर नर्स र अरु काम गर्ने कर्मचारी आफ्नै छोराछोरी जस्तो लाग्छ । उनीहरुको दुःख माथि तनाव थप्नु मात्र हो भन्ने लाग्छ र चुपै लाग्छु ।
पल्लो कोठामा गएर छात्तीको एक्सरे गरें, रिपोर्टले छात्ती क्लीयर भएको बतायो । अस्पताल गएको दशौं दिनका दिन बेडमै आएर पिसिआर लिएर गए । भोली आउछ भनेको रिपोर्ट आएन, पर्सि पनि आएन । सँगैका अरुको आयो तर मेरो आएन । दिउसो आएको डाक्टरलाई सोधें हिजै आएको छ त रिपोर्ट भन्यो । मलाई किन भन्दैनौ त ! के छ मेरो रिपोर्टमा भने, अलिक कडा शब्दमा कराएँ म ।
उसको आफुभन्दा माथिको डाक्टरको नंबर डायल ग¥यो र मलाई बोल्नु भन्यो । मैले भने “यो केटा केटी खेल किन गरेको ? मेरो पिसिआर रिपोर्ट किन बताउँदैनौ ? भने !” तपाईको फेरि पोजेटिभ देखियो भन्यो उसले । अर्को पिसिआर आजै गर्न परो भने मैले । नभन्दै त्यही दिन पीसीआर लिन आयो । त्यो म अस्पताल बसको तेह्रौ दिन थियो । त्यस पल्टको रिपोर्ट भने पर्सिपल्ट बिहान नेगेटिभ भएर आयो ।
क्यानोला सार्दासार्दै दुवै हात घाइते थियो । त्यसबाट दुईवटा औषधि (तर सँगसँगै दिने गरेका थिए ।) दिनको एक पल्ट । पिसिआर नेगेटिभ आउनु भन्दा एकदिन अगाडि अर्थात १४ औं दिन का दिन “अब चाहिदैन” भन्दै नर्सले क्यानोला निकालिन । त्यो दिन अक्सिजनको लेवल निक्कै घट्यो । पिसिआर नेगेटिभ आएको दिन डिस्चार्ज हुने दिन थियो तर अक्सिजन झन झन घटिरहेको थियो । त्यो क्यानोलबाट दिने औषधिले अक्सिजन बढाउने रहेछ, त्यो नभएको कारण मलाई सास फेर्न कठिन भयो ।
त्यसै बेला फोनमा कुनै कर्मचारीले भन्यो तपाई गाडी मगाएर जानु होला, तल गेटमा डिस्चार्जको कागज पाउनु हुन्छ । मैले अक्सिजन भएको एम्बुलेन्स लिएर आउ भनेर भाञ्जालाई भने ।
अस्पतालबाट निस्कन कसैले सहयोग गर्ला भने ठानेको थिएँ तर त्यहाँ कोही आएन । बरु उल्टै फोनमा एउटा युवकको स्वरले भन्यो । तपाईको गाडी आयो ? मैले भने आएको छैन । अनि उसले भन्यो हामीले खोजिदिने हैन, किन अहिले सम्म गाडी नझिकाएको ? तिमीलाई मैले गाडी खोज भनेको छु र ! के भन्न खोजेको तिमीले भने मैले ।
पानी तताउने भाँडो, स्टेण्डफेन, तन्नाहरु समेत हडकेशहरु थुप्रै सामान थियो तर ती सामान बोकेर निस्किने तागत थिएन मसँग । अस्पतालका कुनै कर्मचारी आएनन् । भान्जा हरिले फोन गरेर भने ८।१० हज्जारका सामान होलान छोडिदिनु र शरीर मात्र निकाल्नु, एम्बुलेन्स आइ सक्यो । मैले त्यसै गरें । यो पङखा मिलाएर चलाउनु होस भने त्यो कोठामा रहेका अरु बिरामीलाई र म अस्पतालमा बस्ता टिपोट गरेको डायरी र कलम लिएर निस्किएँ ।
ज्वरो आउनु सामान्य कुरा हो तर कोरोनाले पनि ज्वरोबाट नै आफ्नो उपस्थिति बताउने रहेछ । ज्वरो भन्दा टाउको दुखाई अरु बेलाको भन्दा फरक र कडा महसुस गरें मैले । गन्ध हराउने र जिब्राको स्वाद समाप्त गर्ने कोरोनाको दोस्रो सन्देश रहेछ । स्वाद हराएपछि खाना रुच्दैन र मान्छे कमजोर हुन्छ, त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै शरीरमा कोरोनाको असर बढ्दै जाने रहेछ ।
हिजो तपाईको बिमारी कहानेर थियो, ढाडमा ? कम्मरमा ? किड्नीमा ? अथवा कहाँ ? त्यही ठाउँ छानेर कोरोनाले असर गर्ने रहेछ । मलाई कम्मरमा असर गर्न थाल्यो जहाँ पहिले देखिनै केही समस्या थियो । जीउ थाक्ने, धेरै मान्छेले कुटेको जस्तो जीउ दुख्ने हुन थाल्यो । त्यतिमात्र हुँदा सम्म त केही थिएन । त्यसमाथि अक्सिजन लेवल घट्न थाल्यो ।
अक्सिजन घटेपछि थाहा भयो कि, अब फोक्सोमा असर ग¥यो । धेरै वर्ष पहिले सुकेनास लागेको र चारदशक भन्दा बढी सिगरेट पान गरेको फोक्सो कमजोर त थियो नै त्यसैकारण होला कोरोनाले फोक्सोमा आक्रमण ग¥यो र अक्सिजन लेवल घट्न थाल्यो ।
कोरोनाको आयु र असर
कोरोनाको आयु १२।१५ दिन मात्र हो । त्यसपछि त्यो आफै मर्न थाल्छ । मर्न थालेपछि खाना पनि रुच्न थाल्छ र गन्ध स्वाद पनि फिर्छ तर त्यतिले मात्र अब निको भइयो भन्न हुँदैन । जसलाई सिधा फोक्सोमा असर गरेको छैन उसका लागि जोखिम कम नै होला तर जसलाई फोक्सोमा असर गरेको छ उसले लामो समय सम्म सजग रहनु जरुरी छ ।
अस्पतालबाट आएको हप्ता दश दिन पछि पनि अक्सिजन लेवल नबढेकोले मैले सिटी स्क्यान गरेर फोक्सोको डाक्टरलाई देखाएँ । डाक्टरले भने निको हुने क्रममा छ, औषधि नगरे पनि निको हुन्छ तर ६।७ महिना लाग्छ । औषधि गर्दा चाँडो जाती हुन्छ । उनले औषधी दिएँ एक महिनाको । त्यो खाएपछि अक्सिजन लेवल बढ्यो र पनि भ¥याङ चढ्दा, हिड्दा र भाषण गर्दा धेरै समय सम्म अक्सिजन कमी हुने रहेछ ।
चिसो बिष हो
फोक्सो विशेषज्ञले भनेका थिए, दूध र फलफूल नखानु, त्यस्को कारण के रहेछ भने, दूधले कफ बढाउने रहेछ र फलफूलले चिसो गराउने रहेछ । चिसो भएमा निमोनिया हुने डर रहेछ । पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ आएर घर गएकाहरु धेरैको मृत्यु हुने गरेको कारण चिसो पदार्थ सेवन गर्नु हो ।
त्यसकारण मेरो पनि सुझाव छ “यो कोरोना महामारी रहुन्जेल कोरोना नलागेका स्वास्थ्य मान्छेले पनि फ्रिजमा राखेको चिसो पदार्थ नखाऔं । कोरोना लागेको मान्छेका लागि त चिसो बिष नै हो, यसबाट बचौं कोरोनाबाट बाँचिन्छ ।”
Tags: #विचारकृष्ण अधिकारी